Madaxweyne Farmaajo oo Wadahadal la yeeshay Amiirka Qatar Sheekh Tamiim Bin Xamad
Tuesday May 04, 2021 - 16:20:44 in News by Xaaji Faysal
Farriintaasi qoraalka ah ayaa wakaaladdu sheegtay inuu madaxweynaha Soomaaliya
Amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim Bin Xamad Al-Thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Qatar ee QNA, waxay labada hoggaamiye ka wada hadleen xiriirka labada waddan iyo sidii loo sii xoojin lahaa, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Qadar ayaa sheegtay in ergayga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibedda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday Amiirka Qatar uu soo gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya.
Farriintaasi qoraalka ah ayaa wakaaladdu sheegtay inuu madaxweynaha Soomaaliya soo gaadhsiiyey ergayga gaarka ah Mutlaq Bin Majiid Al-Qahtaani.
Farriintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada waddan, iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo Soomaaliya ka dhacda, si looga dhabeeyo xasilloonida waddanka, sida lagu sheegay farriintaasi ay baahisay wakaaladda wararka ee Qatar.